किन उजाडिदै छ परदेशिको परिवार ? यस्तो छ,आठ कारण !
बुधबार, असार ९, २०७८ ०१:३०:४० युनिकोड
सोमबार, माघ २६, २०७७ Dhading Sanchar
रामकुमार थापा/धादिङ २६ माघ ।
‘तिम्रै सुन्दर भविष्यका लागि’ भनेर परदेशिएका श्रीमान सम्बन्ध बिच्छेद गर्न स्वदेश आउलान् भनेर धादिङका दिलमाया (नाम परिवर्तन) ले कल्पना पनि गर्नुभएको थिएन । चार वर्षअघि मलेसिया जाँदा ‘छोरी र तिम्रा लागि पैसा कमाएर ल्याउँछु, तिमीहरुका लागि सुन्दर संसार बनाउँछु’ भनेका थिए श्रीमानले । तर उनै श्रीमान चार वर्षपछि दिलमायासँग सम्बन्ध तोड्न आए ।फाटेको मन जोड्ने कोशिस त नगरेको हैन उहाँले ।तर हरेक प्रयासहरु असफल भए।
दुई मन नै फाटेपछि सम्बन्ध जोड्नुको पनि के अर्थ ? दिलमाया पनि श्रीमानको इच्छामा राजी हुनुभयो ।स्वदेश हुँदा श्रीमान – श्रीमती मिलेर सम्हालेको घर अहिले भताभुङ्ग भएको छ ।काखको छोरीकोसमेत बिचल्ली भएको छ । बिहे गरेको दुई महिनामै कतार गएका धादिङकै राम (नाम परिवर्तन) १४ वर्ष भयो घर फर्किएका छैनन् । राम सम्पर्कबिहीन हुँदा यता घरमा श्रीमतीको जीवनको रंग उडेको छ।परिवार नै चिन्तामा डुबेको छ । छोरो एक दिन त फर्किएला भने आशमा परिवार छ । तर त्यो दिन आउला या नआउला के ठेगान ?बिहे गरेर गएका पुरुष मात्र होइन, ससाना बालबच्चा छाडेर परदेशिएका महिला पनि फर्किएका छैनन् ।
तीन सन्तान छाडेर कुवेत गएकी धादिङकै अनु (नाम परिवर्तन)को पनि लामो समय भयो सञ्चो बिसञ्चोको खबरसमेत आएको छैन ।बिहे गरेर गएका पुरुष मात्र होइन, ससाना बालबच्चा छाडेर परदेशिएका महिला पनि फर्किएका छैनन् । यता घरमा श्रीमानले जाँडरक्सी खाने र बालबच्चाको रेखदेख राम्रो नगर्ने भएकाले अनुका तीनजना छोराछोरीको बिचल्ली नै भएको छ । बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ छ ।आमा परदेश नजाँदा राम्रो नाना र मिठो खाना नभए पनि छोराछोरीले आमाको माया पाएका थिए । तर आमा परदेशमै सम्पर्कबिहीन भएपछि बालबच्चा राम्रो नाना र मिठो खानाबाट मात्र होइन, आमाको मायाबाट पनि बञ्चित भएका छन् ।
उनीहरु त उदाहरण मात्र हुन् । वैदेशिक रोजगारीको मिठो सपनामा नमिठो दैनिकी भोग्नेहरु हिजोआज थुप्रै भेटिन थालेका छन् ।
हुन त वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले नै देशको अर्थतन्त्र चलेको छ ।तर सरकारले भने वैदेशिक रोजगारीको कारण उत्पन्न भएका यस्ता समस्या न्यूनीकरणमा खासै चासो देखाएको छैन । रोजगारीका लागि परदेशिएकाको परिवारमा पारिवारिक बेमेलका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् ।धादिङमा पनि वैदेशिक रोजगारीकै कारण पारिवारिक विखन्डनका घटना बढेको पाइन्छ ।
किन उजाडिंदैछ परदेशीको परिवार ?
कारण १: श्रीमान – श्रीमतीबीच शंका
वैदेशिक रोजगारीको कारण पारिवारिक विखन्डन हुनुको पहिलो कारण श्रीमान –श्रीमतीबीचको शंका हो । श्रीमान र श्रीमतीबीच विश्वासको वातावरण नबन्दा शंका पैदा भएर घरझगडा हुने गरेको देखिएको छ । श्रीमतीको बारेमा परदेश भएकाहरुलाई परिवारका सदस्य र अरुले पनि अनावश्यक कुरा सुनाइदिने गर्दा पारिवारिक बेमेल हुने गरेको छ । परदेशमा भएकाले पनि श्रीमतीको कुरा सुन्नुको साटो अरुकै बढी कुरा सुन्ने र श्रीमतीका कुरामा विश्वास नगर्दा शंका बढ्दै गएको छ । भन्छन् नि शंकाले लंका जलाउँछ । हो बेलैमा सही विचार नपु¥याउँदा परदेशी र श्रीमतीबीच शंकाले नै सम्बन्ध सकाउँदै लगेको पाइन्छ ।
कारण २:पैसा कसको नाममा पठाउने भन्नेमा विवाद
परदेश गएकाले पैसा कसको नाममा पठाउने भन्ने विषयमा पनि ठूलो विवाद हुने गरेको पाइन्छ । परदेशमा मासिक रुपमा पाउने तलब श्रीमती, आमा वा परिवारको अन्य सदस्यको नाममा पठाउने भन्ने विषयमा परदेशीलाई पनि निकै तनाव हुने गरेको छ । परदेश गएकाले पैसा कसको नाममा पठाउने भन्ने विषयमा पनि ठूलो विवाद हुने गरेको पाइन्छ ।
आमाको नाममा पठाउँदा श्रीमती रिसाउने र श्रीमतीको नाममा पैसा पठाउँदा आमा रिसाउने प्रवृत्तिले परिवारमा ठूलो समस्या निम्त्याएको छ भने परदेशीलाई पनि अनावश्यक तनाव हुने गर्छ । जसको कारण परिवारिक विखन्डन हुने गरेको छ ।
कारण ३:परदेश गएपछि घरदेश बिर्सने
घरपरिवारलाई सुन्दर सपना देखाउनले र आफू पनि परदेशको सुन्दर सपना बोकेर जहाज चढ्नेहरू धेरैले परदेशमा पाइला टेकेपछि घरदेश बिर्सेर उतै रमाउने गरेको पाइन्छ । कतिपय विदेश गएपछि उतै बस्ने, घरमा सम्पर्क नगर्ने, पैसा पनि नपठाउने र बेपत्ता हुने गरेका छन् । जसले गर्दा घर परिवारमा मानसिक तनाव मात्र हैन, अन्य विभिन्न समस्या हुने गरेको छ । परदेश जानेले ऋण काढेर गएको भए साहुको तनाव, घर चलाउन आर्थिक समस्याका साथै बालबच्चाको बिचल्ली हुने गरेको छ । जसको फलस्वरुप वैदेशिक रोजगारीकै कारण परिवार विखन्डन भएका छन् ।
कारण ४:परदेशी भूमिमा मृत्यु वा बेपत्ता हुनु
परदेशमा गएकाहरुको उतै मृत्यु हुँदा वा परदशमै बेपत्ता हुँदा पनि पारिवारिक विखन्डनका घटना बढेका छन् । घरपरिवारलाई सुन्दर सपना देखाउनले र आफू पनि परदेशको सुन्दर सपना बोकेर जहाज चढ्नेहरू धेरैले परदेशमा पाइला टेकेपछि घरदेश बिर्सेर उतै रमाउने गरेको पाइन्छ । परदेशमा श्रीमानको मृत्यु हुँदा घरमा परिवारले वास्ता नगर्ने र लाञ्छना लगाउने गरेको कारण धेरै महिलाहरु समस्यामा परेका छन् । परदेश गएकाहरु वर्षौंदेखि बेपत्ता हुँदा पनि घरमा आफन्तहरु बिचल्लीमा पर्ने, विभिन्न समस्यामा पर्ने र जसको कारण परिवार विखन्डन भएको पाइन्छ ।
कारण ५:लतमा फस्नु
परदेशमा बस्ने कतिपयले लड्री वा टोटो खेल्ने वा लागूपदार्थ सेवन गर्ने गरेको पाईन्छ । परिवारको जिम्मेवारी बोकेर परदेश गएकाहरु यसरी लतमा फसेर परिवारलाई बेवास्ता गर्दै जाँदा समस्या हुने गरेको छ । परिवारमा पैसा पनि नपठाउने र कम्पनीमै मिटर ब्याजको प्रयोग गरी विभिन्न खेलहरु खेल्दा नेपालमा घरखर्च पुर्याउन समस्या हुने गरेको छ । जहाँ अभाव हुन्छ, त्यहाँ कलह सुरु हुन्छ भन्छन्।यही कुरा धेरै परदेशीको जीवनमा मेल खाने गरेको छ ।
कारण ६:परदेशमै घरजम गरेर बस्नु
परदेश गएकाहरु कतिपय उतै घरजम गरेर बस्ने गरेका छन् । कमाउन ऋण काढेर परदेशिनेहरुले उतै घरबार गरेको खबरले यता घरमा ठूलो समस्या सृजना गर्ने गरेको पाइन्छ । परदेश जानेले मात्र होइन, घरमा हुनेले पनि उसँग थुप्रै सपना साँचेका हुन्छन् । त्यो सपना टुट्दा परिवारिक विखन्डन हुने गरेको पाइन्छ ।
कारण ७: पैसा कसको हुने भन्नेमा विवाद
संयुक्त परिवारमा विदेश गएर कमाएको पैसा कसको हुने भन्नेमा विवाद हुने गरेको छ । विदेश गएकाहरुले कमाएको पैसा परिवार सबैले खर्च गर्ने कि परदेश गएकाहरुकै नाममा हुने भन्नेमा परिवारमा किचलो हुने गरेको पाइन्छ । कतिपयको विदेशमा वर्षौं बसेर आउँदा पैसा पनि नहुने र सम्बन्ध पनि बिग्रने गरेको छ ।
कारण ८: सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुँदा पनि पारिवारिक विखन्डनका घटनाहरु बढेका छन् । सामाजिक सञ्जालकै कारण विभिन्न व्यक्तिसँग साथी बन्ने, फोटो शेयर गर्ने र कुराकानी हुँदाहुँदै पछि त्यसकै कारणले समस्या हुने गरेको छ । परदेश गएका सबैको पारिवारिक विखण्डन भएको छैन । धेरैको राम्रो पनि छ । बालबालिकाले राम्रो विद्यालय पढ्न पाएका छन् । न्यानो लुगा लगाउन पाएका छन् । धेरैको जीवनस्तर सुधारिएको छ ।फोटो सपबाट फोटो बिगारेर पोष्ट गर्ने, अश्लिल फोटो वा भिडियो पठाउने र पछि त्यही कारणले श्रीमान श्रीमतीबीच विवाद हुँदा पारिवारिक विखन्डनका घटनाहरु बढिरहेका छन् ।
परदेश गएका सबैको पारिवारिक विखण्डन भएको छैन । धेरैको राम्रो पनि छ । बालबालिकाले राम्रो विद्यालय पढ्न पाएका छन् । न्यानो लुगा लगाउन पाएका छन् । धेरैको जीवनस्तर सुधारिएको छ ।तर कतिपयले यस्तै ससना कुरालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा घरबार नै बिग्रिएका छन् । त्यसकारण तपाईँ परदेशमा हुनुहुन्छ या परदेशीको परिवार हुनुहुन्छ भने यस्ता कुरामा ध्यान दिएर वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २६, २०७७